ITuffet Studio @EquleniFarm - I-Airbnb
ITuffet Studio @EquleniFarm
Sedgefield, Western Cape, eMzantsi Afrika
Ifama sinombuki zindwendwe onguDiane
Istudiyo esihle, sanamhlanje nesikhuthazayo saseBali esinepuli/ibhafu yamanzi ashushu yabucala, indawo yokubasa engaphakathi nangaphandle. Pet friendly for socialised, izinja non-roaming. Imibono engaphazamisekiyo yeentaba namachibi. Ngokugqibeleleyo ibekwe phakathi Knysna & George. Iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwiilali ezimangalisayo zaseWilderness naseSedgefield. Kufuphi neelwandle ezimangalisayo, iivenkile zokutyela, iimarike, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngepara. Isiseko esifanelekileyo sokubuka i-Garden Route.
Igcinwe kwi-fynbos kunye nokubukwa okungapheliyo le studio enhle kwaye yabucala inento yonke oyifunayo kwiholide yokuziphekela yothando. * Inkqubo yamandla yokunyusa amandla ukulwa nokuphela kwamandla.
Ihonjiswe ngendlela yale mihla nehonjiswe kakuhle ngebhedi enkulu enamashiti omqhaphu waseYiputa kunye neetawuli zokuhlamba ezitofotofo.
Iveranda yakho yabucala ine-cocktail pool yeentsuku ezishushu zasehlotyeni ezitshintshela kwibhafu yamanzi ashushu eyenziwe ngamaplanga ukuze ziphole ngokuhlwa. Iveranda yakho eneendawo zokuphumla ezinelanga, isitulo esihle esijingayo, inyama yerhasi eyojiweyo okanye umlilo weenkuni nangaphandle kwendawo yokutyela.
Kukho indawo yokuphumla/ikhitshi elincinci, ene-hob yegesi, i-microwave kunye nefriji epheleleyo. Kukho umlilo omhle ngaphakathi kunye nengubo yombane ngokuhlwa kwasebusika. Kanye a Smart TV kunye Netflix. Ishawa enkulu entle ibonakala iyigadi enentaka yabucala.
Ayikokuhlala nje kuphela, yinto enokonwatyelwa yonke.
Kuhle ukuhambahamba epulazini. Vumela izinja zakho zibaleke ngokukhululekileyo ngeenxa zonke i-fynbos yethu yesanti egqunyiweyo kunye nokupholisa echibini lethu okanye echibini lendalo.
Thatha uhambo oluya efama kwi-Wilderness National Park uze wonwabele ukunyuka intaba i-Mole Rat & Rondevlei bird-hide. Ababukeli beentaka izulu nabafoti baphupha.
Chitha ingokuhlwa ecaleni kwefama yakho yabucala ukuze ungcamle imilenze. Emva koko zipholele kwibhafu yakho enamanzi ashushu yabucala phantsi kwengubo yeenkwenkwezi, umamele indalo namaza akude. Okanye ujikeleze phantsi kwemithi kwisitulo esihle sokuxhoma.
Chitha iintsuku zemvula ubamba i-snuggling kwindlwana yakho epholileyo ecaleni komlilo ogqumayo ubukele i-Net Netflix.
Izinto ezinokusetyenziswa eziqukiweyo kwimali omele uyibhatale:
* Ipuli yecocktail yabucala/ibhafu yamaplanga enamanzi ashushu, iquka iinkuni kunye neetawuli zokuqubha.
* I-braai yegesi
* I-wifi yasimahla engaphendulwanga,
* I-Smart TV,
*ukusetyenziswa kweyona ndawo iphambili yokuqubha,
* ukuhambahamba efama *
izinto zokuhombisa, kunye neeti, ikofu ehluzayo, iiruski, ubisi, amanzi acociweyo kunye nemiqamelo yezilwanyana.
Iinkuni nezomlilo * isidlo sakusasa esithunyelwa kwindlu yakho esemaphandleni
iipakethi zefama oziphetheyo * Iipikniki * I-Fynbos & champagne
turn-down * inkonzo yendlu esemaphandleni, ukuhlamba iimpahla, ukuhlamba imoto
Sisekelwe kwi-hamlet entle yaseRondevlei., ecaleni kweWildderness National Park kumacala ayi-2 kunye nokufihla intaka nokunyuka ukusuka kwifama.
2kms ukusuka N2 phakathi Knysna & George kunye Kms ezimbalwa ukusuka Wilderness & Sedgefield & amabhishi zabo ezimangalisayo, iimarike & zokutyela.
Kufuphi nezinto ezinokusetyenziswa kodwa kusekungcamla ubomi basemapulazini. Sinemibono engaphazamisekiyo yamachibi amangalisayo, iintaba namahlathi enza i-Garden Route ikhetheke kangaka.
Sisebenzisa ukuzihlola kwaye kusoloko kukho umntu okhoyo efama ukuba ufuna nantoni na.